Aung's Investment: 2012
လိုတိုရှင်း လိုရင်းကိုပဲသွားရအောင်။ အခုတလော Extremely Oversoldဖြစ်နေတဲ့ commodityကတော့ ရွှေပါပဲ။ ရွှေဈေးကို အဓိက ဂယက်ရိုက်နေတာကတော့ Strengthening USDပါ။ Gold Futuresတွေဟာ USDနဲ့ ရောင်းဝယ်ခံရတာမို့လို့ USDအားနည်းရင် ပိုအဝယ်လိုက်ပြီး USD Strongဖြစ်လာရင်တော့ Selloff အလုပ်ခံရတတ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် USDဟာ နှစ်ဆန်းကတည်းကနေ တန်ဖိုးတက်လာသလည်း။ US Economy အခြေအနေမကောင်းလို့ US Federal Reserveဟာ USDကို ရိုက်ထုတ်ပြီး Devaluationလုပ်လာတာ 1.2 trillion USDကျော်နေပါပြီ။ Financial Crisisဖြစ်ပြီး သုံးနှစ်အကြာမှာ လစဉ်၊အပတ်စဉ်ထွက်နေတဲ့ US Economic Dataတွေဟာ 2011နှစ်မကုန်ခင်ကစပြီး တော်တော်လေး ကောင်းလာပါတယ်။ ဒီတော့ Marketဟာ Federal Reserveအနေနဲ့ နောက်ထပ် USDအသစ်ရိုက်ထုတ်ဖို့ Chanceတော်တော်လေးနည်းသွားပြီဆိုပြီး USD Downtrendဟာ အဆုံးသတ်တော့မယ်လို့ Pricing in လုပ်နေကြတာပါ။ ဒေါ်လာရိုက်ထုတ်တိုင်း Devalutionနဲ့ Inflationary Pressureတက်လာမှာဖြစ်တာကြောင့် ရွှေဈေးဆောင့်တက်သလို ဒေါ်လာရိုက်မထုတ်တော့ဘဲ Interest Rate outlookဟာ Rosyနည်းနည်းဖြစ်လာတာနဲ့ ရွှေဈေးဟာ ထိုးကျတက်ပါတယ်။
Gold exposureကို Directလိုချင်ရင်တော့ Gold Futuresကို Tradeနိုင်ပါတယ်။ အခု Activeအဖြစ်ဆုံး Futuresကတော့ April 2012 Futuresတွေပါ။ ဒါပေမယ့် Gold Futures Tradeဖို့ Margin Requirementအရမ်းများပါတယ်။ ဒီတော့ Goldကို indirectly tradeနိုင်တာကတော့ Gold Mining Stockတွေနဲ့ပါ။ Fundamentalအရမ်းကောင်းပြီး Technically အရမ်းOversoldဖြစ်နေတဲ့ Stockကတော့ NYSE-listed Newmont Mining (NEM)ပါ။
NEMဟာ Februaryလကုန် Highဖြစ်တဲ့ 64လောက်ကနေ ဆင်းလာလိုက်တာ အခုဆိုရင် 53နားရောက်နေပါတယ်။ A little over 16% correctionဖြစ်ပြီးပြီလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာပြထားတဲ့ daily and weekly chartတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် low 51ဝန်းကျင်မှာ Support ကောင်းကောင်းရှိတာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Coincidently, February Highကနေ 20% correctionလောက် areaလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် 51-52area ရောက်ရင် NEMကို Long/ဝယ်သင့်ပါတယ်။ NEMဟာ NYSEမှာ Strongestအဖြစ်ဆုံး Gold Minerပါ။ 51-52ဝန်းကျင်ဟာ Extremely Oversold Levelလို့ Safely Defineလုပ်နိုင်ပြီး သင့်တော်တဲ့Riskကို ယူသင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ကို မေးနိုင်တာက NEMဟာ ရွှေဈေးပြန်တက်မှ သူလည်းလိုက်တက် မှာမို့လို့ ရွှေဈေးက ပြန်တက်နိုင်လို့လားလို့ပါ။ အခုတလော ရွှေဈေးကျတာဟာ အရမ်းမြန်ပြီး Brutalဖြစ်ပါတယ်။ US Economy recovery trendဟာ သင့်တော်တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်စရောက်နေပြီလို့ ပြောနိုင်ပေမယ့် USDဆောင့်တက်လာတဲ့ Trendကို Satisfyဖြစ်လောက်အောင် အားမကောင်းသေးပါဘူး။ Most importantly, Federal Reserveဟာ Strengthening USDကို လက်ခံနိုင်လောက်အောင် Bullishမဖြစ်သေးပါဘူး။ Marketရဲ့ USD expectationဟာ အနည်းငယ် Ahead of themselvesဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် Gold Priceဟာ Downtrendရောက်နေပြီဆိုရင်တော့ ဆက်တိုက်မဆင်းသင့်ပါဘူး။ At least, Downtrend continueမလုပ်ခင် ပြန်ပြီးနည်းနည်း Recoverဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အဲဒီ့အခါမှာ NEMလို့ Stockတွေဟာလည်း strongly recoverဖြစ်မှာပါ။ Gold Minerတွေကို Pricing in လုပ်တဲ့နေရာမှာ Long-term Moving Averageကို ကြည့်ပြီး ဈေးဖြတ်သင့်ပါတယ်။ Goldရဲ့ Long-term moving averageဟာ အခုချိန်ထိ Up trendပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ Personally, NEMကို ၅၁-၅၂ကြားမှာ Bullishတော်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ရွှေဈေးဟာ NEM ၅၂တောင်မရောက်လိုက်ဘဲ ပြန်ပြီး Recoverဖြစ်ရင် ၅၃ဖြစ်နေရင်တောင် NEMကို ဝယ်သင့်ပါကြောင်း။ Putastop-loss at 49.
Posted by Aung Myo Htet at 3/18/2012 07:39:00 PM0comments
Labels: Gold, NEM
RIO Trade Update - China Easing
China Central Bank announced over the weekend that Reserve Requirement Ratio or RRR (the ratio of the money Chinese banks must keep in the bank, used to control credit growth) would be cut by 50 basis points from February 24th.
That annoucement is bullish for many miners including RIO because RIO earns 30% of revenue by selling Iron Ores, Copper and Coal to China. Cutting RRR means Chinese government has allowed banks to pump more credit into the slowing economy, preventing the so-called hard-landing scenario.
Since Monday is Public Holiday in US, I highly recommend closing RIO short positions on Tuesday. If entered before or on the result date, you should not lose any cent.
Posted by Aung Myo Htet at 2/20/2012 09:15:00 PM0comments
Labels: earnings, RIO
RIO Trade Update
Feb9Earnings disappointed Investors and Traders therefore the trade was to SHORT.
RIO has been trending down even before the result. But from the result date, it has made 5% unrealised profit so far.
Money Flow and MACD both confirm trend reversal.
Tension between Greece and its creditors has been rising fast and markets are spooked of disorderly Greece default.
Profit taking should happen around $55. That would make 8% return unleveraged. With 1:3 leverage, return would be 24% easily.
RIO ADR Daily Chart
Posted by Aung Myo Htet at 2/16/2012 09:15:00 PM0comments
Trade of the Month - RIO earning
stock quote : RIO (RIO TINTO ADR)
earning release : Full Year Result (Feb 9, 2012 Thursday)
current technical : Heavily Overbought
earning expectation : in-line earnings is expected to trigger "sell-the-news" trades. only much-better-than-expected earnings can lift the share price into the new trading zone 65-75 range.
If $65 resistance holds.
If $65 resistance is decidely broken following blow-out earnings
RIO (ADR) Daily Chart
Posted by Aung Myo Htet at 2/07/2012 08:45:00 PM0comments
BAC Short Trade : +7%, or -1%? Depends on how you executed your trades
BAC Tradeရဲ့ current situationကို updateလုပ်ပေးတာပါ။ Jan 12ရက် US Marketမဖွင့်ခင်က Shortချင်ရင် Shortလို့ရပြီလို့ ကျွန်တော်Recommendလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့ညက 6.99မှာ ဖွင့်ပြီး 6.79မှာ ပိတ်သွားပါတယ်။ Shortချင်တဲ့သူဟာ Sellအရင်လုပ်ရပါမယ်။ Sellingလုပ်ဖို့ Good Rule-of-Thumbကတော့ "Sell at the morning madness"တဲ့။ ဆိုလိုတာက Opening Time Priceဟာ များသောအားဖြင့် မှားတတ်ပါတယ်။ အလောတကြီး Executeသူ့ထက်ငါလုပ်တတ်တာမို့ Price Actionဟာ Closing Timeလောက် Reliableမဖြစ်တတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် Proအများစုဟာ Closingကိုပဲ ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်တတ်ကြပါတယ်။
BAC Daily Chart
Anyway, Opening madnessကို take advantageယူနိုင်ခဲ့ရင် (၇)ကျပ်နီးပါးလောက်မှာ ဝင်နိုင်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ Closeမှဝင်တော့လည်း ခြောက်ကျပ်ပြားရှစ်ဆယ်နီးပါးပေါ့။ Closeမှာဝင်ခဲ့မိရင် မှတ်ထားပါ။ Short-sellerတစ်ယောက်အတွက် Morning madnessကို အခွင့်အရေးယူနိုင်ရင် ယူသင့်ပါတယ်။
Short Tradeတစ်ခုဖွင့်ပြီးသွားရင်တော့ ဘယ်အချိန်မှာ ပြန်ဝယ်ရမလည်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဆုံးဖြတ်ထားရပါမယ်။ Stop-lossပဲလုပ်လုပ်၊ Profit-takingပဲလုပ်လုပ် Tradeကို ပိတ်ဖို့က ပြန်ဝယ်မှကို ရပါမယ်။ ဝယ်ဖို့အတွက် Rule-of-thumbကတော့ "Closing Prices are always more reliable". Closing or near-closing priceလို့ပြောရင်တော့ ပိုမှန်ပါမယ်။
Short Trade openလုပ်အပြီး နောက်သုံးရက်အတွင်း share priceဟာ 6.60နဲ့ 6.48ကြားမှာ ပြေးနေခဲ့ပါတယ်။ Short positionတစ်ခုဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင် ထားသင့်တဲ့ Another Rule-of-Thumbကတော့ Shorts are supposed to be held "SHORT". Short tradeတစ်ခု မြတ်နေပြီဆိုရင်၊ Profit %ကလည်း Reasonableဖြစ်တယ်ဆိုရင် မြန်မြန်သာ ပြန်ဝယ်လိုက်ပေတော့။ 6.99မှာ Shortပြီး 6.49မှာ ဝယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် 7%လောက် မြတ်နေပါပြီ။ Leverage နှစ်ဆ(သို့)သုံးဆသာလုပ်ထားရင် 14%-21%လောက်ဆိုတော့ လောဘကို အတောသတ်ပြီး Profit taking လုပ်သင့်ပါတယ်။
Profitမယူမိခဲ့ရင်လည်း ပြဿနာမရှိပါဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အဲဒီ့နေ့ Closeအထိ Stockဟာ Bearish Trendသွားနေတုန်းပါပဲ။ Jan 18မှာ ဘာလို့ပြန်တက်သွားသလည်း ကြည့်ရအောင်။ တရားခံကတော့ IMFပါပဲ။ IMFက Eurozoneကို ကယ်ဆယ်ဖို့ နောက်ထပ် $500 billionလောက် Rescue Fundထဲမှာ ထပ်တိုးဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းထွက်လာတာပါပဲ။ သေချာဖတ်ကြည့်ရင် ဘာမှသေချာတာ မပါပါဘူး။ US Governmentကဆိုရင် မြန်တယ်။ သူတို့ဆီကတော့ ထပ်မမျှော်တဲ့နဲ့။ IMFက တကယ်တမ်း China, Indiaအစရှိတဲ့ Emerging Powerhouseတွေဆီက Contributionကို လိုချင်တာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူ့မှမလှုပ်ကြပါဘူး။ But, it'sabig But, Stockတွေကတော့ အကြိုက်တွေ့ပြီး တက်ကုန်ကြတာပါပဲ။ ဒီEuphoriaကုန်တဲ့အထိတော့ ကျမယ်မထင်ပါဘူး။
အဲဒီ့နေ့က 6.80မှာ ပိတ်တော့ အဲဒီ့ဝန်းကျင်မှာ ပိတ်နိုင်ခဲ့ရင် နည်းနည်း မြတ်ပါသေးတယ်။ မပိတ်ခဲ့ရင်ရင်လည်း မမှားသေးပါဘူး။ အမှားဖြစ်နိုင်ခဲ့တာ ပြောပြပါမယ်။ Knee-jerk reactionဖြစ်ပြီးတော့ Jan 19th Opening timeမှာ ပိတ်ခဲ့ရင် အမှားပါပဲ။ Jan 19thကြာသာပတေးနေ့က BACရဲ့ quarterly earningပါ။ Good earningမို့လို့ ဆောင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာတွေးကြည့်ရင် Traderအများစုဟာ BACရဲ့ earningကို ကောင်းမယ်လို့ မှန်းထားပြီးသားပါ။ ဆိုလိုတာက High Expectationဟာ Priceထဲမှာ baked-inလုပ်ပြီးသားလို့ ပြောချင်တာပါ။ ဒါကြောင့် Closing timeလဲရောက်ရော တစ်နေကုန် ဆင်းလာတဲ့ share priceဟာ 6.96ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။
သောကြာနေ့ Jan 20thမှာတော့ 7.07မှာ ပိတ်သွားပါတယ်။ Weekendမှာ ပေါ်လာတတ်တဲ့ Headline Newsတွေ ရန်ကိုကြောက်လို့ Shortသမားအများစုဟာ စနေမဝင်ခင် Coverလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ Short-coverလုပ်တယ်ဆိုတာ ပြန်ဝယ်ပြီး Tradeကို ပိတ်လိုက်တာ ဆိုလိုတာပါ။ Same worryရှိလို့ 7.07ဝန်းကျင်မှာ ပိတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ -1%လောက်ပေ့ါ။ This is part of the process and do not have to worry about it. Traderဆိုတာ Carefulဖြစ်တာကောင်းပါတယ်။ မပိတ်ခဲ့လည်း ကိစ္စမရှိ၊ All the good news for BAC have come out and baked into share price for now. S&P500, Dow Industrial Averageဟာလည်း Technical Resistance levelတွေနဲ့ နီးနေပြီမို့ ဒီနေ့ပြန်ဝင်မယ်ဆိုရင် ဝင်သင့်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က Tradeကို ကိုင်ထားရင်လည်း အခြေအနေကို ကြည့်ပြီး closing timeနားမှာ ဝယ်သင့်ရင် ဝယ်ပြီး Closeသင့်ပါကြောင်း။
Posted by Aung Myo Htet at 1/23/2012 08:56:00 PM 1 comments
Labels: BAC, short sell
BAC Short Trade Update
BAC Short Trade updateပါ။ BACဟာ မှန်းထားတဲ့ target zoneကို ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် Shortချင်သူများ Shortနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း။ Stop-lossကိုတော့ $7လောက်မှာ ထားသင့်ပါတယ်။
Posted by Aung Myo Htet at 1/12/2012 08:50:00 PM0comments
New Year, New Trade
Happy New Year everyone. If you're in this business, I hope you have made some money last year even though it can only be possible if you were trading and shorting most of the time.
ကျွန်တော်Shortဖို့ Signal ပေးရင် Indexတွေကို Exhibitထားပြီး ပြောတတ်တာ ပျင်းစရာများကောင်းနေလားလို့ နှစ်သစ်မှာတွေးမိပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီနှစ်ကစပြီး ပိုပြီးဒဲ့ဖြစ်တဲ့ Trading Signalတွေကို လိုတိုရှင်းရေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လုံးရေးခဲ့တဲ့ Technical Postsတွေကို ပြန်ဖတ်မယ်ဆိုရင် Basic fundamentalsတော်တော်များများကို စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင် Graspလုပ်နိုင်ကြမယ်လို့ Assumeလုပ်ထားပါတယ်။
အိုကေ၊ လိုရင်းကို သွားရအောင်။ Recommendလုပ်ချင်တဲ့ Tradeကတော့ Bearish Tradeပါ။ Stockကတော့ အများရင်းနှီးပြီးသား BAC (Bank of America)။ Just to be clear, I have no issue with BAC :) The trade is purely fundamental, headline and technical driven.
အောက်က Chartကို ကြည့်လိုက်ပါ။ 5.96 resistance levelကို မနေ့က Breakoutဖြစ်မလားလို့ ကျွန်တော်သုံးရက်လောက် စောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ မနေ့က Breakoutကို volumeကောင်းကောင်းနဲ့ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒီတော့ Technically, next levelကတော့ 6.86နားမှာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ အဲဒီတောင် ရောက်မယ်မထင်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Very Conservativeဖြစ်ချင်ရင်တော့ အဲဒီလိုင်းနားရောက်တဲ့အထိ စောင့်ချင်ရင် စောင့်နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် Shortသင့်သလည်းဆိုတာတော့ အောက်မှာ Bulletတွေနဲ့ လိုတိုရှင်းပဲ ရေးထားပါတယ်။ အသေးစိတ်ကတော့ လက်သည်ကိုချည်းပဲ အားမကိုးဘဲ ကိုယ်တိုင်လည်း Researchလေးလုပ်ပြီး နည်းနည်းညှစ်ကြပါလို့။
Reasons to Short
- Too fast - since Dec 19th, BAC has made 26.45% gain at yesterday close. That's in less than3weeks!
- Yesterday rallyဟာ ADP payroll serviceက ဒီနေ့ထွက်မယ့် US Non-farm payroll estimateကို လူတိုင်းက တစ်သိန်းခွဲလောက်မှန်းနေတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့က သုံးသိန်းနှစ်သောင်းခွဲထွက်မယ်လို့ ကြေညာလိုက်တဲ့အတွက် BACဦးဆောင်ပြီး Retail Bank stockတွေ ဆောင့်တက်ကုန်ကြတာပါ။ များများဆောင့်တက်ပြီးလေ Shortလုပ်ချင်တဲ့ Traderအတွက် Safeဖြစ်လေပါပဲ။ Volumeများလေ ဝယ်လက်ကုန်ပြီးသားဖြစ်လေပါပဲ။ ဒါကြောင့် after yesterday, BAC becomes my favourite stock to short. မနေ့က BACဟာ တစ်ရက်ထဲနဲ့ 8.6%တက်ခဲ့တာပါ။
- USAမှာ Economic dataတွေဟာ ထင်တာထက် ကောင်းနေပေမယ့် Europe/Euro zoneမှာတော့ ပိုဆိုးနေပါတယ်။ Italian 10-yr bond yieldတွေဟာ Danger zoneဖြစ်တဲ့ 7%အပေါ် ပြန်ရောက်သွားပါတယ်။ Greeceကလည်း Marchလအကုန်မှာ Disorderly Defaultဖြစ်နိုင်တယ်လို့ အစိုးရကိုယ်နှိုက်က ခြိမ်းခြောက်သလိုတောင် ပြောနေပါတယ်။
- Chinese Shanghai Market Indexဟာ ပြီးခဲ့တဲ့Postမှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ downtrendဟာ ပြန်နာလန်မထူနိုင်ပဲ 2300 Support levelအောက်မှာပဲ ဝပ်နေပါတယ်။
- This may seem strange but Wall Street actually does not really want very strong economic data now because many believe that will stop the Federal Reserve's new Quantitative Easing program (new money printing) which is extremely good for the Stock market.
- Open the trade within the circled zone.
- Place the stop above 6.86 resistance line. For e.g., at 6.90
- Take profit between 5.96 and 5.62. And if we're extremely lucky, it may drop likeastone to 5bucks again :)
Posted by Aung Myo Htet at 1/06/2012 10:27:00 PM0comments
BAC Short Trade : +7%, or -1%? Depends on how you ...